Ngwaahịa ngwaahịa & Prototyping - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Dongguan Chengda Rubber & Plastics Technology bụ teknuzu omenala silicone ngwaahịa & roba ngwaahịa emeputa, ọkachamara na-eme ka ahaziri silicone na roba ngwaahịa na akụkụ.
Ndi oru injinia anyi nwere otutu ihe omuma na ihe omuma n'iche iji mee ka echiche gi di nma, jiri ihe omuma anyi na ihe omuma anyi belata oge gi n'ahịa. Anyị nwekwara ike ịmepụta ngwaahịa dịka echiche gị. Ọ bụrụ na ị nye ihe nlele, anyị nwere ike 3D i theomi ihe nlele ahụ wee nweta 3D nke ngwaahịa a, mgbe ahụ anyị nwere ike gbanwee imewe dabere n'echiche gị.
Ọrụ Ntughari Otutu:
Ọzọkwa, mgbe ị chọrọ ịhụ na-eche imewe nke omenala roba akụkụ tupu ebu begingha-amalite, Chengda Rubber & Plastic nwere ike na-amị ngwangwa prototypes maka gị, anyị nwere ike ibipụta sample na 3D-ebi akwụkwọ ma ọ bụ na anyị nwere ike ime ka sample ebu na chepụta n'omume gị.
Chengda Rubber & Plastic sales team nwere ezigbo ndidi ma dịkwa mfe iji kwurịta okwu, ndị ahịa anyị ga - ewe ndị injinia ka ha wee nwee ike ikwurịta okwu nke ọma, gụnyere usoro, ndidi, akụrụngwa, agba, ọrụ yana ọnụ ahịa arụmọrụ, nyere gị aka ịchọta ihe kacha mma. ihe ngwọta maka ọrụ silicone omenala gị ma ọ bụ ọrụ roba omenala.